भयावह बन्दै मानसिक स्वास्थ्य : ओखलढुंगामा ७ सयद्वारा औषधि सेवन, आत्महत्या कहिले कति ? « जालपा न्युज Jalapa News
ओखलढुंगा) — सिद्धिचरण नगरपालिका १२ का एक पुरुषले घरमा अस्वाभाविक क्रियाकलाप देखाउन थाले । सामान्य नलागेपछि परिवारका सदस्यहरू चिन्तामा परे । टोलाउने, झडंग रिसाउनेजस्ता स्वभाव देखाएपछि उनकी श्रीमतीले मनोसामाजिक परामर्श कार्यकर्तालाई समस्या सुनाइन् ।
बढ्दो आत्महत्या दर मानसिक समस्याको कारण सबैभन्दा डरलाग्दो रूपमा आत्महत्या बढेको देखिन्छ । डिप्रेसनको कारण आत्महत्याको दर बढेको हो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकले यही पुष्टि गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामै जिल्लामा १७ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । ०७२/७३ मा १९ जना, ०७३/७४ मा ३१ जना, ०७४/७५ मा ४१ र ०७५/७६ मा ६२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । डरलाग्दो गरी आत्महत्या दर बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजीव श्रेष्ठले बताए ।
औषधि ल्याउँदैन स्वास्थ्य कार्यालय जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूले मानसिक स्वास्थ्यका रोगीहरूले सेवन गर्ने औषधि माग गर्दैनन् । समस्याको पहिचान गरी चिकित्सकले औषधि सेवन गर्न भनिएका रोगीको संख्या हुँदाहुँदै औषधि खरिद तथा माग गर्ने नगरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरू भने चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना मानसिक रोगीलाई औषधि दिन नमिल्ने भएकोले औषधि खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामा नपठाइएको जवाफ दिन्छन् । ‘मानसिक रोगीको औषधि अनुमानको भरमा खरिद गरेर वितरण गर्न मिल्दैन ।’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विश्वराज दाहालले भने, ‘त्यसैले अहिले भने पहिचान भएका १९ जना रोगीहरूको हामीले औषधि माग गरिसकेका छौँ ।’
असहाय मानवमुक्त सडक मानसिक स्वास्थ्यको समस्याका कारण सडकमा आइपुगेका असहाय मानवमुक्त सडक बनाउन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका सडकमा भेटिने मानसिक सन्तुलन गुमाएका र असहाय व्यक्तिलाई उद्धार गरी न्यूनतम मानवअधिकारभित्र पर्ने सुविधा उपलब्धसहित संरक्षण गर्ने नीति ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कानुन शाखाका कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले बताए ।
आत्महत्या कहिले कति ? आर्थिक वर्ष संख्या ०७१/०७२१४ ०७२/०७३१९ ०७३/०७४३१ ०७४/०७५४१ ०७५/०७६६२ ०७६/०७७ को तीन महिनामा १७
‘रोगीको संख्या बढेकै हो’ मनोविद्हरूले समेत नेपालमा मानसिक रोगीको संख्या दिनानुदिन बढेको बताउने गरेका छन् । सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक कारण मानसिक रोगीको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको मनोविद् डा. पशुपति महतले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपालमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २ हजार ७ सयले आत्महत्याको संख्या बढेको देखिएको छ ।
सरकारले औषधि उपलब्धताका लागि सहज वातावरण नबनाउँदा अझै समस्या थपिन सक्ने अनुमान छ । रोगीको पहिचान गरेर औषधिको उपलब्धलतालाई सहज बनाउन पहल भइरहे पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको मनोविद् महतको भनाइ छ । मानसिक समस्या बढ्नुमा सुक्ष्म कारणहरू लुकेको देखिन्छ । यसले विकराल रुप लिन नसक्ला भन्न नसकिने मनोविद्हरूको अनुमान छ । कान्तीपुरबाट